"CHERRY WONDER": SHARAXAAD, ASTAAMAHA BEERAHA IYO DARYEELKA - CHERRY
Kala soocista cherry mucjisooyinka: talooyinka ugu fiican ee beerto iyo daryeelka
Taariikhda cherry hybrid iyo cherry bilaabay qarnigii XVII ka dib markii pollination rabitaanka laba dalag oo miro. Thanks to shaqada ee jilayaasha, Beelaha ama shinbiraha, sida loogu yeedho, waxay noqdeen kuwo waxtar badan, adkaysi u ah xaaladaha cimilada iyo awood u leh fruiting.
"Cherry Wonderful": sharaxaad iyo astaamaha uur-jiifka
Hybrid "cherry miracle" ayaa ka muuqatay natiijada shaqada ee Fiisooyinka Ukraine ee L. Taranenko iyo A. Sychov. Galka wuxuu isku daraa sifooyinka wanaagsan ee noocyada "Valery Chkalov" (cherry macaan) iyo "Griot Ostgeimsky" (cherry). Breeders waxay isku dayeen in ay ku dhajiyaan tayada ugu fiican ee isdhexgalka: iska caabin ah qabow, fruiting badan iyo difaaca jirro.
Cherry noocyo "Cherry mucjisada" ee sharaxaadda calaamadaha dibadda ayaa sidoo kale nuugay sifooyinka noocyo deeqda ah. Goobta miraha dalagga miraha oo u eg sida johnta, iyo inflorescences waxay la mid yihiin midabka cherry. Geedku wuxuu leeyahay laamo toosan, oo qaro weyn leh, iyada oo aan lahayn jilbaha, oo leh jilif madow madow, daboolay burooyinkeeda waaweyn. Caleemaha waa weyn, qaab wareegsan, sida cherry macaan. "Cherry Wonderful" ayaa gaadhay saddex mitir oo dherer ah. Muuqaal kala duwan oo kala duwan ayaa ah awooda lagu abuuro burooyinkeeda caleemaha sannadlaha ah, kaas oo sababa fruiting. The berry ugu horeeya u bislaadaan on sapling laba sano ah. "Cherry Wonderful" miro badan oo miro ballaaran, ilaa toban garaam oo miisaankeedu, soo ururiyey in burush lix ilaa siddeed xabbadood oo miro. Glossy miro maroon madow waxay leeyihiin dhadhan macaan leh oo leh acid acid. Si loo ilaaliyo sifooyinka noocyada kala duwan, habka faafinta daaqsinka ayaa lagu dabaqaa cherry.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1997-kii, gobolka UTA ee Maraykanka ayaa doortay cherry astaan ​​rasmi ah. In America, waxay jecel yihiin berry this iyo sanadka dhamaadka Febraayo ay u dabaaldegaan maalinta Cherry Pie Day - iidada ah cherry pie.
Maxaa jecel "cherry mucjisada"
Cherry waa perennial, iyada oo daryeel ku haboon uu midho dhasho oo ku nool hal meel ilaa labaatan sano. Waa muhiim in la doorto meesha saxda ah ee loogu talagalay.
Qorraxda ama hooska, taas oo u fiican koritaanka guulaystay
Geedka "cherry miracle" - dhirta qorraxda, oo aan qorrax iyo kuleyl, ubaxu wuxuu noqon doonaa sabool, fruiting iyo ka xun. Goobta qashinka ayaa qallajin doona. Waxaa ugu wanaagsan in la beero meel u dhow xayndaab, ka fog geedaha sare ama guriga. Deedka waxay u adeegi doontaa hoy ku yaal geeddi-socodka kaas oo waxyeello u geysan kara.
Shuruudaha loogu talagalay ciidda "cherry miracle"
Xulashada ugu wanaagsan ee ciidda cherry waxay noqon doontaa carrada ciidda leh falcelin dhexdhexaad ah. Waa wax aan loo baahnayn in la gooyo geedaha meelaha hooseeya ama meelo ka baxsan, waa mid aan lagu talinaynin meelo ka baxsan biyaha dhulka.
Noocyada beeritaanka qoryaha cherry
Cherry Weyn waa sahlan tahay inuu koro, laakiin ka hor inta beerto, waxa ugu muhiimsan waa in la doorto sapling saxda ah. Qaar badan oo iibiyeyaasha aan waxba galabsan waxay iibiyaan hoostooda "cherry miracle" geedo cherry.
Ma taqaanaa? Waxaa soo baxday in ay jiraan jeeriga aan la dabooli karin, sida sakura, qadarin iyo hees by Japanese ah. Dadka deggan Dhulka Dayaxa Dayaxa, Sakura wuxuu u dhaqmaa sidii horursad: haddii ay si weyn u duulaan, waxaa jiri doona goosashada wanaagsan ee bariiska.
Sida loo doorto seedling beeritaanka
Guga "miraha mucjisada" waxaa lagu kala saari karaa jiritaanka burooyinkeeda iyo caleemaha, la cadaadiyo laanta. Baaritaan caafimaad oo caafimaad leh ayaa lahaan doona nidaam xidideysan iyada oo aan la arki karin waxyeelo muuqata.
Warshadu waa inay yeeshaan astaan ​​siman oo ah midab midab leh oo aan midab lahayn oo aan dhaawac lahayn iyo jiritaanka cayayaanka.
Laamuhu waa inay noqdaan kuwo jilicsan oo si haboon loo abuuray, waa in xariiqda dhexe waa inay ahaataa ugu yaraan 60 cm.
Ceelka loogu talagalay "cherry mucjiso" waxaa la diyaariyaa bil ka hor beerashada. Qeybta badhkeed waxay ka buuxsantaa ciidda bacrin ah iyo Bacriminta: dabiici ah iyo fosfooraska-potassium. Haddii aaggu yahay aammin ahaan asiidhka ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darto habka lime (2 kg ceel kasta). Masaafada u dhexeysa dhirta - illaa shan mitir.
Tan iyo Cherry Wonderful waa qaraabada ugu dhow ee jeeriga macaan, tignoolajiyada daryeelka ayaa la mid ah, laakiin Revna, Bryansk Pink, Regina, Bullish Heart, Leningradskaya madow, Iput sidoo kale waxay leeyihiin wax u gaar ah ee geedka sii kordhaya.
Geedo beerto "cherry miracle"
Diidmada waxaa la doorbidaa bisha Abriil. Ka hor inta jiilaalka, seedling noqon doonaa waqti ay degaan, qaadan xidid iyo xasilloonaan qaboobaha. Hoos u gelinta godka, toosi xididdadiisa, daboolka xididka waa in laga tagaa dhulka. Nidaamka laftiisu waa ka fiican yahay in la bilaabo maalinta buuq badan, laakiin haddii cimiladu si fiican u dhisan tahay, ka dib marka la beerto "cherry mucjisada" shinni ah waxaa laga ilaalin karaa qorraxda leh alaab aan la taaban karin. Pristvolny looxaan abuurka dhir barafka qoyan ama humus.
Sida loo daryeelo jeeriga "cherry mucjisada"
Xeerarka daryeelka ee geedaha mucjiso waa isku mid ah geedaha oo dhan: waraabinta, quudinta, dabacsan, gabbasho iyo jaridda.
Waraabinta koowaad ee geedka waxaa la fuliyaa ka dib markii ubax, halka quudinta. Mar labaad waqtiga fruiting. Under geedka kasta ku shubay ilaa lix baaldiyo oo biyo ah. Marka uu jiro roobab culus, heerka waraabka ayaa yaraaday. Waraabinta ugu dambeysa waxaa la sameeyaa ka hor xilliga qaboobaha ka dib markii caleen dayrta. Sanadka ugu horeeya ee geedi-socodka waa in la waraabiyaa toddobaadle. Abaarta, samee hababka waraabinta.
Sida loo daryeelo ciidda
Wareegga Pristvolny labada geedo iyo geedo qaangaar ah waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah haramaha. Marka cawska la jarayo, ku dar midaan la xakameynayo, si nidaamka xididka geedka u helo helitaanka hawada. Mulch hareeraha qashinka ee cherry ma oggolaan doono ciidda inay qalajiso iyo crack, hayn qoyaan iyo kulaylka.
Miracle Cherry Bacriminta Cherry Talooyin
"Cherry Wonder" waa in si habboon loo bacrimiyo, haddii kale beerashada ma keeni doonto natiijada la filayo. Bacriminta waxaa laga dalbadaa ceelka intaan la beeriin, sidaa daraadeed dhirta lama geyn karo labadii ama saddexda sano ee soo socda. Marka cherry bilaabaan inay midho u dhali, waxay u baahan doontaa bacarimiso.
Waa muhiim! Waa inaadan ka qaybgelin xeryaha nitrogen-ku jira, jeeriga waxay u baahan yihiin kiciyeyaasha, laakiin xad-dhaaf waxay u horseedi doontaa hoos u dhac ku yimaada fruiting iyo sii xumaanshaha caabbinta barafka.
Sida loo ilaaliyo jeeriga ka soo cayayaanka iyo cudurada
Kala sooc "cherry miracle" maaha mawduuc in ay weeraraan duqsiyada cherry, dhif ah xanuunsan. Laakiin daryeelka saxda ah waa mid aad muhiim u ah. Cudurada intooda badani waxay dhibaateeyaan geedo la dayacay,
oo leh xad-dhaaf ah qoyaan
bacriminta xad-dhaafka ah
iyadoo leh adkayn adag oo taajka ah iyo haramaha ka baxda haramaha.
Marka hore: dabacsan iyo kabaha;
labaad: ha ka badin ama ka badnayn;
Saddexaad: Gubashada Nadaafadda.
Xeerarka ku saabsan manjooyin "cherry miracle"
Manjada ugu horeysa waxaa lagu sameeyaa kobaca sanadlaha ah, iyaga oo yareynaya hal shanaad. Gubashada guga waxaa ka mid ah saarista laanta waxyeellada leh iyo kuwa daciifka ah. Haddii dhirta uu si xun u dhibaatooday xilliga jiilaalka oo daciif ah, ku qaataan manjooyin rejuvenating dhan taajka. Nidaamkan waxaa la samayn karaa shantii sanaba mar. Laamo la gooyey oo farageliya koritaanka caleemaha kale, koraya gudaha taajka ama si adag u fidsan. Laamoodyada dibedda ah waxay badanaa xoqan yihiin si aanay u dallicin "cusub".
"Cherry Wonderful" ee sharaxaadda kala duwan iyo iyada oo la eegayo badanaa dib u eegista ee bannaanka u adkaysata dhowr taxane ah cudurada fangas. Cayayaanka soo noqnoqda ee cherry - duudduubka cherry for "cherry mucjiso" sidoo kale ma aha mid halis ah. Iyadoo xulasho caqli ah ee pollinator ah geed, waxaad u heli kartaa dhalidda sare iyo tayada dhadhanka miro.
Digniin! Rugaha ugu fiican ee "cherry mucjiso" waa Annushka, Donchanka, Dzherelo, Goobta Yaroslavna. Ma aha ku haboon yahay sida pollinators kala duwan Valery Chkalov, Valeria, Krupnoplodnaya.
"Cherry Wonderful" waa jiilaalka-adag, inkastoo xilliga qaboobaha kulul ee daran uu geedku jabin karo, taas oo yarayn doonta dhalidda. In cherry, fruiting hore horeba sannadkii saddexaad. Cunto kala duwan iyo dhalidda weyn: laga bilaabo hal geed ayaa laga soo ururin karaa in ka badan toban rodol oo ah jeeriga. Miraha "miraha mucjisada" ee sharaxaadda kala duwan yihiin ugu delicious, casiir, saxarka ah waa cufan, macaan, ma jiraan wax si xoog leh loo yaqaan, sida jeeriga caadiga ah, dhadhan macmacaan fudud.
Harvest "miraha mucjiso"
Jawska waxay u bislaadaan bisha Juun, miraha way weyn yihiin, illaa sagaal garaam oo miisaankeedu yahay, dhalaalaya, burgundy madow. Fruiting fruiting da'da shan ama lix sano, laga bilaabo geed weyn oo qaangaar ah ayaa laga saaraa min toban ilaa labaatan kiiloogaraam oo ah jeeriga. Isku day inaad goosashada sida berri ah u bislaadaan, ha sugin isku dhafka, miraha ka sarreeya oo u dhaw in qorraxdu ay u bislaadaan ka hor inta hoose, iyo marka goosatada, qarxaan ama u noqdaan cunto loogu talagalay shimbiraha.
Haddii hadhuudhkii aad soo ururisay loo malaynayo in la soo rarayo, waxaa wanaagsan inaad ka qaadatid in yar oo bisil ah si ay beeraha oo aad u bislaaday aan waxyeelleyn inta lagu jiro gaadiidka. Haddii wakhtiga beergooyska ay jirto cimilada roobka, waxaa fiican in la diyaariyo berry soo go'ay xilliga qaboobaha: dalaggu lama kaydin doono muddo dheer. Guud ahaan, beergooyska ayaa si fiican loo soo ururiyay cimilada qallalan gelinka dambe.
Iyadoo la tixgelinayo geedka dhirta laga soo saaro goobaha, waa muhiim in la barto tayada kala duwan ee geedka Molodezhnaya, Kharitonovskaya, Shokoladnitsa, Vladimirskaya, Turgenevka, Black Large, Zhukovsky, Ural Ruby, Morozovka, Lyubskaya.
Ugu dambeyntii, waxaan rabaa inaan sheego, "Cherry mucjisada" waa la koray si fudud, waa dhadhan fiican leh iyo dhirbaaxo wanaagsan miro. Miraha cherry waa faa'iido u leh dadka waaweyn, iyo carruurta, labadaba badeeco daawo, iyo cunto. Goynta "jiilka mucjiso", waxaad cuni kartaa cusbo oo aad naftiina siisid fitamiinada xilliga jiilaalka.
Ubaxa Cuntada - Oriental Lily leh sharaxaad iyo sawir
Miyaan u baahanahay inaan xirto basil iyo sida loo sameeyo si sax ah? Qalabaha kala-soocida marka qashin-qubka
Muxuu bakayle u jeexi karaa fluff?
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "Phoenix 640"
Leningrad caano "teleports" ka iibsanaaya dukaanka ilaa beerta
Sanadka 2016-ka, dekedda dekedda ee Nick-Tera ee kuyaala Ukraine ayaa ka badan 2,4 milyan oo tan oo ah hadhuudh